ကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့ – December 4th 2010 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့ – December 4th 2010
ကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့ – December 4th 2010
Posted by kai on Nov 26, 2010 in Think Tank | 33 comments
ဂယ် ဆို အိမ်ပြန်မယ်
ခု နှစ် လဲပါဘူး
ဒါပေမယ့် RX3286 ဆိုတော့
286 တစ်ကွက် 328 တစ်ကွက်လောက်တော့ အပီဆော်ကြဟေ့
ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုရင် လူတိုင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်က ဗြဟ္မာစိုရ်တရားလက်ကိုင်ထားဖို့ပဲ … အဲဒါမှ ဗြဟ္မာ့ပြည်ရောက်လိမ့်မယ် … သေရမှာ ကြောက်စရာမလိုပါ …
ဒီပိုစ်ကို ဖတ်မှဘဲ သဘောပေါက်တော့တယ်.. တည့်တည့် လာတဲ့ ကျည်ဆံ ၀ပ်နေရင် လွတ်တယ်။ မကြာခင် လာတော့မယ် ဆိုတဲ့ ဥက္ကာခဲ ဒိုက်ထိုးပြီး ဘုရားရှိခိုးရင် အခုတည်းက လာရင် အကြောအချဉ်တွေ လျော့လို့ လွယ်လွယ် ကူကူ ရှောင်လို့ ရနိုင်သား.. အင်း.. နဲနဲ တော့ စဉ်းစားသင့်ပြီ.. ဦးခိုင် ပြောသလို မဟာယန ပြောင်းဖို့.. အဟေး…
၁) အကောင်းဆုံးရေမွေးတွေရယ်၊ ချောကလက်ရယ် နာရီရယ်ဝယ်ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်မယ်။
၂) ဘတ်စ်ကားတစင်းငှားပြီး ဆွေမျိုးတွေအကုန်ကားပေါ်တင်ပြီး မြန်မာပြည်အနှံ့ ဘုရားဖူးသွားမယ်။ လမ်းမှာတွေ့သမျှကလေးတွေကို ချောကလက်ကြွေးမယ်။ အဖွားတွေကို ရေမွေးပေးမယ်။ အဘိုးတွေကို နာရီပေးမယ်။
၃) ဗုဒ္ဓဂါယာကိုသွားမယ်။ မက္ကာကိုသွားမယ်။ ဂျေရုစလင်ကိုသွားမယ်။
၄) ပဲရစ်ကိုသွားမယ်။ အီဖဲမျှော်စင်နဲ့အနီးဆုံးမှာထိုင်ပြီး .. မျှော်စင်ကိုငေးရင်း ကော်ဖီတခွက်မှာသောက်မယ်။ မိုနာလီဇာပုံရှိတဲ့ပြတိုက်သွားကြည့်မယ်။
မိသားစုနဲ့အတူတူ အီတလီပင်လယ်ကမ်းခြေသွားပြီး မီးလေးဖို၊ အကင်လေးစားပြီး …ပင်လယ်ကိုကြည့်ရင်း နောက်ဆုံးအချိန်ကို စောင့်မယ်..။
နောက်တပါတ်နေ … အားလုံးသေမယ်.. ကိုယ်လဲသေမယ်ဆိုတာကနေ… ထွက်လာတဲ့အတွေး၊အမြင်တွေက ..ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်.. သေသေချာချာမြင်သွားနိုင်လို့ပါ..။
အမှန်အတိုင်း… ချရေးကြည့်ပါလား..။ လူမသိစေချင်ရင်လည်း ..စာရွက်မှာချရေးကြည့်ပါ..။
သေဆိုတော့ လဲ သေလိုက်ရုံပေါ့ဗျာ ဘာမှတွယ်တာ စရာမှ မထားထားတား)
2.ကတော့ ဟိဟိ မိန်းမယူမယ်ဗျာ မရရအောင်ယူမယ် ကောင်မလေးကိုလည်းကမ္ဘာပျက်တော့မှာဆိုပြီးမယုံရင်ဒီ
page ကိုဖတ်ခိုင်းမယ်ဗျာ မရဘူး မယုံဘူးဆိုရင်ခိုးပြေးမယ် ဟိဟိ
4.ကတော့ဗျာ ၀ိပသာနာတရားမှတ်မယ် ၀င်သက်ထွက်သက် ဖြစ်တယ် ပျက်တယ်ပေါ့
၁။ ဝဋ်ကျွေးတွေကျေအောင် ဆပ်ပြီးမှ သွားချင်တယ်။
၂။ ဝဋ်ကျွေးတွေကျေအောင် ဆပ်ပြီးမှ သွားချင်တယ်။
၃။ ဝဋ်ကျွေးတွေကျေအောင် ဆပ်ပြီးမှ သွားချင်တယ်။
၄။ ဝဋ်ကျွေးတွေကျေအောင် ဆပ်ပြီးမှ သွားချင်တယ်။
မိန်းမ ယူမယ် …..အရင်..လူပြိုကြီးဗျ….ဟီး
ဒီတစ်ခါကော ဂယ်လားဟင်။ ဂယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ မူရင်း link လေးပြပါလား ပိုယုံသွားအောင်လို့ပါ။
(1) Will do meditation & concentrate only in that.
(2) Donate all my properties, if anybody still want them.
(3) Go back to Mother Land ( Myanmar ).
သေမယ်လို့ကြိုတွေးပြီးကြောက်နေတာထက် …. အဲ့ဒီအကြောင်း မတွေးတာက ပိုကောင်းမယ။် တကယ်မလွဲမသွေကမ္ဘာပျက်နေပြီဆိုမှ မိဘတွေဆီဖုန်းဆက်မယ်၊ ချစ်သူဆီဖုန်းဆက်မယ် အဆင်ပြေရင် လာတွေ့ခိုင်းမယ် ပြီးမှ သက်တောင့်သက်သာလေး သေဖို့နေရာရွှေးမယ် ။ ဒါဆိုအိုကေပေါ့ ။
သူခြောက်တိုင်းလည်း မကြောက်ကြပါနဲ့၊ သွားလေသူ ကြီးတော်ပေးထားခဲ့တဲ့ အဏုမြူဗုံးဒဏ်က လွတ်နည်းရှိပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဟီရိုရှီးမားမြို့ အဏုမြူဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှ ရှင်သန်ခဲ့သူတဦးရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ဖြည့်စွက်မွမ်းမံထားတာပါ။ အပေါ်ဖြူအောက်ဖြူဝတ် တကိုယ်လုံးကို ထုံးသုတ်ပြီး အဖြူရောင်ကသိုင်းရှုနေရင် နြူကလီးယားဗုံး တသိန်း ကွဲမဲ့အားလောက်တော သင်္ကြန်ရေကို ပြွတ်စုတ်နဲ့ ပက်သလောက်သာရှိပါလိမ့်မယ်။ ပိုသေချာချင်ရင်တော့ နာမည်ကိုပါ ကိုဖြူတို့ မဖြူတို့လို့ ကြိုပြောင်းထားလိုက်ပါ။ ရွာထဲမှာ ဝှိုက်ဆိုသူနာမည်နဲ့ ပို့စ်တင်ဖေါ်တင်ဖက်တဦးတော့ ရှိသဗျ။ ကြည့်ရတာ သူလည်းဒီနည်းကို သိပုံရတယ်။
ကျွန်တော်ကိုတော့ အပေါ်ဖြူအောက်ဖြူဝတ် တကိုယ်လုံးကို ထုံးသုတ်ပြီး gazette ရွာထဲမှာ နေခိုင်းတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးနေပြီလားဗျ။
သေရတော့မယ်ဆိုတာသိပီးရင်တော့ အိမ်ပြန်ပီးမိသားစုနဲ့ပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလိုက်တော့မယ် ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး သူငယ်တန်းဆိုတဲ့အချိန်ကစပီး ခုထိသက်ဆိုင်ရာအလုပ်တွေ မနားတမ်းလုပ်ခဲ့ပီးပီ တကယ်သေရမယ့်အချိန် တရားခွေဖွင့်ပီး အိမ်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ် ~~
အခုမှပဲ သေနည်းမျိုးစုံထွက်လာတော့ တယ်….အတူတူသေကြတာပေါ့ ..ပျော်စရာကြီး…. နီးနေပြီနော်…..ကမ္ဘာပျက်မပျက်မသိသေးဘူး…အခု Internet Connection တော့ ပျက်နေပြီ…..
4 ရက်နေ့သေချာရင်တော့ မွေးနေ့ကိုကြိုလုပ်ရမှာပေါ့။
Knowing ဇာတ်ကားထဲကလို မိသားစုနဲ့အတူနောက်ဆုံးအချိန်ကိုမျှော်ရမှာပေါ့
တရားကတော့ တက်နိုင်သလောက်မှတ်တာပေါ့ ..
ဟီး .. ချစ်သူလည်းမရသေးဘူး .. ဖူးစာရှင်အမြန်လာပါ။
အင်း …. သေတော့မယ်ဆိုမှ ဘာလုပ်ချင်မှန်းကို မသိတော့ဘူး ….:)
ကိုခိုင်ရေ ပထမတော့ မန်းမလို့ပါ
ဒါပေမယ့် စာရှည်သွားလို့ ပိုစ့်အနေနဲ့ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အားပေးပါဦး ၊ မန်းပါဦး …..
သံသရာမပါအောင် အကြွေးတွေလဲ ဆပ်ရဦးမယ်..
kai ရေ..သိပ်မနောက်နဲ့နော်..တော်ကြာ အချို့က တစ်ကယ်ထင်ပြီး
ယောက်ျား၊ မိန်းမတွေ ပြေးယူလို့ မတော်တာတွေနဲ့ရရင် တရားခံဖြစ်နေမယ်..။
thans for website says:
-စာအုပ်ထိုင်ဖတ်မယ် စာအုပ်ထိုင်ဖတ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့ စစ်တပ်ဘက်ကတယောက်လောက်ကို ခေါင်းရင်းမှာချိတ်ထားတဲ့ ကင်ဒို နဲ့ သွားခုတ်မယ်
ကမ္ဘာပျက် တာကောင်း ပါတယ် နေရာတိုင်း မှာအမုန်းတရားတွေ နာကျင် မှု့ တွေ လူမျိုးရေးမခွဲခြား ဘူဆိုတဲ့လူတွေ လူမျိုးရေး ခွဲခြားနေတာတွေ နာကျင်နေ ပါပြီ ဘက်လိုက်မှု့တွေ သိပ် များလွန်းနေပါပြီ အားလုံးသေကြ တာပို ကောင်းပါ၏ စစ် တိုက် စရာလဲ မလို ပါ…….
ကမ္ဘာ ပျက်မည့် နေ့ အခု သို့မဟုတ် ဒီနေ့ ဖြစ်ပါစေလား
တခြားတော့ မသိဘူး.. ၄ရက်နေ့ အင်တာနက်လိုင်းကို ၀င်စောင့်သွားလို့ ဆက်တငန့်ငန့် loading ဖြစ်နေတာ ဖြစ်မယ်။
ဒီနေ့ အတွက် ဆောင်ထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကတော့ ဒီနေ့မှာ အသုံးကျသွားပြီ.. မီးပျက်လို့.. ဖယောင်းတိုင် ၁တိုင် မကုန်ခင်မှာ လာတယ်။
ရှိတဲ့ အ၀တ်စားတွေထဲက ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး၊ ကိုယ်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မယ့် အ၀တ်အစားကို ရွေးဝတ်မယ်… ရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ၀ယ်ချင်တာတွေ ရနိုင်သလောက် ၀ယ်မယ်… ကိုယ်အမြတ်နိုးဆုံး ကောင်မလေးကို ဘေးမှာ ခေါ်ထားပြီး ကိုယ်အချစ်ဆုံး မိဘတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေဆီသွားမယ်.. သူတို့နဲ့ အတူ သာယာတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေလိုမျိုးလေး တစ်နေရာမှာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖေးမရင်း၊ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောရင်းနဲ့ အတူ ကုန်ဆုံးမယ်… စားချင်တာတွေကို အတူတူ ချက်စားကြမယ်၊ ညဘက် မီးပုံပွဲလေး လုပ်ပြီး အတူတူသီချင်းဆိုမယ်၊ ဂစ်တာတီးမယ်… အကြောက်ပြေအောင် ကစားနည်းအမျိုးမျိုး ကစားကြပြီး နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးချင်ပါတယ်…